Samuel Eto’o oo fariin u diray xiddigaha Barcelona kahor kulanka El Clásico ee Real Madrid – Gool FM
Samuel Eto’o oo fariin u diray xiddigaha Barcelona kahor kulanka El Clásico ee Real Madrid
Dajiye October 10, 2021
(Barcelona) 10 Okt 2021. Halyeeyga Barcelona ee Samuel Eto’o ayaa xaqiijiyay in kooxda reer Catalonia ay wax ka beddeli karto hanaanka horyaalka Spain haddii ay ku guuleysato inay ka adkaato Real Madrid kulanka El Clasico.
Labada kooxood ayaa ku kulmaya 24-ka October garoonka Camp Nou, kulanka ugu horeeya ee El Clásico xilli ciyaareedkan, taageerayaasha Barcelona ayaana rajeynaya in kooxda ay ka gudbi doonto qaabka liita ay kaga biloowdeen horyaalka La Liga.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Halyeeyga Barcelona ee Samuel Eto’o, wuxuuna yiri:
“Dhawaantan Barcelona waxay I galisay dhibaato, waqtiyadan waa kuwo ku adag qof walba oo jecel kooxda.”
“Taageerayaashu uma tagi doonaan daawashada Messi ama Cristiano Ronaldo, Barcelona ayaa si xun ku bilaabatay, tani waa run, laakiin kani waa kulan gaar ah waana inay ciyaartoyda ka faa’iidaystaan si ay xilli ciyaareedka u beddelaan, guul ay ka gaarto Real Madrid waxaa laga yaabaa inay la mid noqoto 6 dhibcood.”
Real Madrid ayaa haatan ku jirta kaalinta koowaad ee kala sarreynta horyaalka Spain iyadoo leh 17 dhibcood, halka Barcelona ay fadhiso kaalinta 9-aad iyadoo leh 12 -dhibcood, iyadoo ay xusid mudan tahay in Barca uu baaqi u yahay hal kulan.
Roy Keane oo sharaxay sababta Sancho uusan ugu fiicnaanin Manchester United
Xulka qaranka France oo ku guuleystay koobka UEFA Nations League kaddib markii uu garaacay Spain… +SAWIRRO